Mashruuca dayactirka dekedda Boosaaso oo la balaarinayo. – Radio Daljir
Bosaso, Jan 29 – Wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda Puntland ayaa maanta shaacisay inay bilaabayso mashruuc lagu dayactirayo dekedda magaalada Boosaaso islamar ahaantaana lagu qodayo dekedda magaalada Boosaaso oo ay qayb ka mid ah fadhido carro badan.
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Eng. Saciid Maxamed Raage oo shir jara’id ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa ugu baaqay gaadiidka ku xiran qaybo ka mid ah dhismaha dekedda inay ku baneeyaan muddo 48-saacaadood.
Wasiirka ayaa dhinaca kale xusay cidii fulin waydo go’aanka ah,in gaadiidkeeda ka saarto dekedda muddo 48-saacadood gudahood ah laga qaadi doono tallaabo adag,islamarhaanaataana ay yeelan doonto masuuliyadda wixii dhibaato ah ee gaadiidkooda soo gaarta.
Dhinaca kale waxaa uu ugu baaqay dadka degan qaybo ka mid ah guryaha ku dhow dekedda inay baneeyeen,waxaana uu intaasi raaciyay go’aankaasi inuu qayb ka yahay qorshaha wasaaradda ay ku dayactirayso dekedda Boosaaso.
Dekedda magaalada Boosaaso ayaa tan iyo sanadkii 2011kii waxaa kasoconaysay qorshe lagu qodayo qaybo ka mid ah dekedda kadib markii la sheegay inay carro badan ay salka dhigatay qaybo ka mid ah dekedda.
Mashruuca lagu dhisayo dekedda ayaa waxaa iska kaashanaya wasaarada dekedaha & gaadiidka badda, shirkadda KMC, iyo barnaamijka cuntada aduunka ee WFP.